မြစ်ဆုံ(သို့) ဧရာဝတီမြစ် ရဲ့ အပြစ်လား? «
မြစ်ဆုံ(သို့) ဧရာဝတီမြစ် ရဲ့ အပြစ်လား?
Jun18 by kachinwaves
မလိယန်ကျေးရွာသည် ယခုအောင်မြင်သာ စံပြရွာသစ်၏ မြစ်တဖက်တွင်ရှိသောရွာဖြစ်သည်။ ယင်းရွာတွင် တောင်ယာခုတ် လယ်လုပ်ရင်း ၀ါတောစိုက်ရင်း အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသည့်နယ်ခံရွာ အိမ် ထောင်စု ၁၀ အိမ်ရှိသည်။ အဆိုပါရွာသားများ၏ ၀ါးတောများကို မြေတူးစက်ကြီးများဖြင့် တူးဆွ၊ ထူးကော်ပေးပြီ ရေကာတာ၏ရေပိုလွဲလမ်းကြေင်းတွင် ကျရောက်သောရွာ ဖြစ်သည့်ဒေါင်ဗန်ကျေးရွာနှင့် အောင်ဂျာယန်ကျေးရွာ များအတွက် ရွာသစ်တည်ထောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုရွာတည်ထောင်ခဲ့သော နေရာမှာ မလိယန်ရွာသားများရဲ့ ၀ါးတောများဖြစ်ကြသည်။ ဒေသခံများကို မည်သည့်အကြောင်းမှရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိပဲ ၂၀၁၀ မေလ တွင် လာရောက်ထူးကော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တုန်းက ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းမှ ဓားပလိုင်လွယ် ကာ ကျေးဇူးပြုပြီး မကော်ပေးကြပါရန်၊ ၀ါးတောဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်ဟု အနူးအညွတ် တောင်းပန်ခဲ့သည်။ကချင်တောင်သူမှန်ရင် ဓားပလိုင်လွယ်မြဲ ဖြစ်သော်လည်း ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းအား ဓားကိုင်ကာလာရောက်ကြိမ်းမောင်းသည့်ဟု စွပ်စွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းပိုင်သော မြေဧကမှာ စုစုပေါင်း(၁၂) ဧကရှိပြီး ၀ါးများ ခုတ်ရောင်းခြင်း၊ မျှစ်များ ထုတ်ရောင်းခြင်းဖြင် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးဝင်ငွေ သိန်း ၅၀ ခန့်ကို ဖန်တီးလျှက်ရှိသည်။ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းခံရသော ဒေါင်ဗန် ကျေးရွာနှင့် အောင်ဂျာယန်ကျေးရွာတို့နေဖို့ရာ မလိယန်ရွာသား များရဲ့ ခြံများကို ဘာနှစ်နာကြေးမှမပေးပဲ သိမ်ပိုက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျန်ယန်မှ အမျိုးသမီးတစ် ဦးမှာ သူတို့ပိုင် ၀ါးတောအား ပြောင်းသလင်းခါ အောင် မြေတူးစက်ကြီးများဖြင့် တူးကော်ပေးခဲ့သည်ကို သွားတွေ့ရှိရာမှ စိတ်ဖောက်ပြန်သွားရာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။
တဖန်အေးရှာဝေါလ် မှ ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းအား ကျန်ရှိခြံမှဝါးများ ကို ၁-၂ အတွင်း အပြီးခုတ်ယူဖို့ လာပြောသဖြင့်အခုတ်ရန် အလုပ်သမား ၁၀ ဦးအား နေ့စားအဖြစ်ငှားရမ်းကာ ၁၀ရက်တိုင်တိုင် တစ်ရက်ကို ၁၉၀၀၀၀ ကုန်ကျပြီး ၀ါးများကို ခုတ်ကာပုံထားခဲ့သည်။သို့သော် ၀ါးများကို အပြီးမထုတ်နိုင်ခင် မြေတူးစက်မောင်းသည့်တရုတ်က ပုံးထားသောဝါးများကို ကြိတ်ကာ မြေဖို့လိုက်သည်။ နစ်နာကြေးမရရှိသည် သာမက လုပ်အားခပါးရှုံးကာ ၀ါးတောများလည်းမရှိတော့ပါ။ ထိုကြောင့် မိအေးနှစ်ခါမက သုံးခါနာရသည့်အဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်။ အထက်အမိန့်ဟုဆိုကာမြေတူးခြင်းကို အပြစ်မဆိုသော်လည်း ပင်ပင်ပန်းပန်း ပိုက်ဆံကုန်ပြီး ခုတ်ပုံထားသည့်ဝါးများကို ကြိတ်ပေးပြီး မြေဖို့လိုက်သည်မှာ အလွန်ပင်ခါးသီးလှသည့် အတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
“ဆယ်ရက်ကျော် ခုတ်ပြီးပုံးထားသည့်ဝါးကို သူတို့စက်ကြီးဖြင့်တကြိမ်သာ ခုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သွားပြောလည်း အထက်အမိန့်လို့ပြန်ပြောတယ်။ အထက်အမိန့်ဆိုရင်လည်း ၀ါးခုတ်ကာ ထုတ်ထား ပြီးသား မြေမှာ သွားတူပါလား။ ဘာလို့သူများပုံထားတဲ့ ၀ါးပုံကို ကြိတ်ပေးလိုက်တာလဲ။ အေဒီမြေတူးစက်တူး တဲ့တစ်ရုတ်ကို သွားပြောလည်းနားမထောင်းဘူး။ အခုကသူများငွေကုန်ခံ အပင်ပန်းခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ ၀ါးပုံကိုမှ တက်ကြိတ်ရတယ်လို့ကွယ်။ အဲဒါကတက်တက်အနိုင်ကျင့်ဒါပဲ။ နောက်နေ့မြို့နယ်ဥက္ကဌ တွေတက်လာတော့ကျွန်တော်ကဥက္ကဌကြီးတို့ဘယ်လိုလဲဗျာ။ ခုတ်ပြီးပုံထားတဲ့ ၀ါးတွေကိုမှ တက်ပြီးကြိတ်ပေးရတာလို့ ရှုံးပြီ ထပ် ရှုံးရအောင်လုပ်ထာလားဗျာ။ ဒီဝါကကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းတန်းဖိုးရှိတယ်။ တစ်နေ့၁၉၀၀၀၀ ကုန်ကျခံ ပြီး ခုတ်ထားတဲ့ဝါးတွေကို အဲဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီလောက်မနှိပ်စက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးလို့ ခင်ဗျားတို့ တူးတာဆုရင်ဘာမှမပြောလိုပါဘူး လို့ပြောလိုက်တယ်” ဟု ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းကပြောပြပါသည်။
ဒေါင်ဗန်နှင့် အောင်ဂျာယန်ရွာမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော သူများသည် မည်သည့်ပင်ဆို စေ အိုးအိမ်များ နစ်နားကြေးများ တစ်နှစ်စာ ထောက်ပံကြေးများရရှိခဲ့ကြသည်။ မလိယန်ဒေသခံများမှာ လယ်မြေများ ၀ါးတောများ ရှုံးဆုံးရသည့် သာမက မည်သည့်ထောက်ပံကြေးမှလည်းမရှိကြပါ။ သွားတောင်းသော်လည်း နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ ဖြင့် ပေးမည်ပေးမည်သာဆိုသည်။ သို့သော် နစ်နားကြေးတစ်ပြားမှမရသည်မှာယခုဆို သုံးနှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ဖြစ်သည်။ ယင်သုံးနှစ်ဆိုသည်မှာ ရွာသားများ အတွက် ၀ါးများထုတ်ရောင်းကာ ကိုယ်ပိုင်ဝင် ငွေ သ်ိန်းရာချီ ရှာဖွေနိုင်သောအခွင့်အရေးတွေ လည်းဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ပင်တူပေသည်။ ထို့ကြောင့်လျော်ကြေးပေးမယ် ဆိုလည်း ဒီရှုံးဆုံးနစ်နာမှုတွင်ကို ပါထည့်တွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဒေသရှိဝါးများ ကို ဒေသခံများက စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထားကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၀ါးတစ်လုံးရဲ့ပေါက်စေ မှာ ယခုဆိုရင် အနည်းဆုံး ၅၀၀ မှ ၁၅၀၀ ထိရှိသည်ဖြစ်သည်။
“၀ါးများသည်ငါတို့မိသားစုအတွက်ထမင်းအိုးလည်းဖြစ်တယ်၊ ကလေးတွေအတွက်ကျောင်းစရိတ်လည်းဖြစ်တယ်၊ မိသားစု၏ကျန်မာရေး၊သာရေး ၊နာရေး၊ လူမူရေး၊ ဘာသာရေး အကုန်ဟုတ်တယ်။ နှစ်တော်တော်ကြာကြိုးစားအစိုက်ပြီး အခုမှ အသီးအပွင့် စားနေရခါစချိန်မှ အခုကဲ့သို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက် တော်တော်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ခံစာချက်တွေကိုဘယ်သူကိုမှ ရင်ဖွင့်ရမှန်းမသိတကယ်ခံစားရတယ်။ အခုမှ ပြန်စဆို လည်း အသက်ကြီးနေပြီ” ဟုဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းကဆက်ပြောသွားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာကို မည်ကိုက မည်မျှသိတယ်၊ မည်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ယနေ့ ပြည်သူလူထုတွေ မေးခွန်းစရာဖြစ်နေပါပြီ။
← မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ချက်ပြုတ်ရေးအတွက် ခက်ခဲ
ဂျန်မိုင်ကောင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအားဖမ်းဆီး →